Tuesday July 08, 2014 - 18:52:29 in Wararka by Web Admin
Siyaaradaani oo aheed tii 16-aad ee lagu xusayo Macalin Axmed ayaa waxa qur’aan Aqriska siyaarada oo socdo Mudo 3-maalin ah si siman uga soo qeybgalay Culuma’udiinka Ahlusunah Waljamaac oo ka kala socday Jikooyinka waa weyn ee Daruuqu Suufiyah, Aqoonyahano, Talaamiida ku abtirsata jameecada reer Sheekh C/raxman Ow Cumar, iyo guud ahaan Dadka reer Warsheekh.
Qadmooyin Qur’aanka Kariimka kadib ayaa waxa sidoo kale culuma’udiinki kasoo qeybgalay Siyaarada halkaa ku aqriyeen Qasiidooyin aad umacaan badan iyo salawaatka Xabiibkeeni Maxamed (NNKH).
Macalin Axmed Sheekh C/raxman OW Cumar oo siweyn loogu yaqiinay maxabada Xabiibka iyo Owliyada Ilaahey isla markaana Qasiidooyin dhowr ah ku cabiray ayaa waxa siyaaradiisa lag a aqriyay qaar kamid ah Qasiidooyinka oo caanka ku ahaa Macalinka.
Siyaarada ayaa waxa lagu soo qatimay sida caadada u ah Daruuqu Suufiyah Xilqooyinka dikriga sida Seyliciyada iyo Uweysiyada .
Siyaarada ayaa waxa duco kusoo qatimay Saaxibul Sijaadaha reer Sheekh C/raxman Sheekh Cumar, Sheekh Qaasim Sheekh C/raxman isagoo halkaa ugu duceeyay dhamaan inti kasoo qeybgashay Siyaarada Macalinka iyo dadki sida gaarka ah uga qeyb qaatay hab soomi qabsoomida Siyaarada oo ugu horeeyaan Owlaada Macalin Axmed Sheekh C/raxman iyo guud ahaan reer Sheekh Cabdi Ow Cumar isagoo sheekhana ugu duceeyay, in Siyaarada macalin kusiiyo danbi Dhaaf iyo Camal Saalix ah .
Gaba gabadi Siyaarada Macalin Axmed Sheekh C/raxman ow Cumar ayaa kusoo dhamaatay Jawi Aad uqurux badan iyadoo dhamaan dadki kasoo qeybgalayna ee wajiyadooda qarisay Farxad iyo nuur aan lasoo koobi Karin
(Daawo Sawirada By Mobile)
Sawir Qaade: Maxamud Sheekh Axmed Yare
Diyaarinti: Abdirahman Sheikh Abdullaahi